Penguin 2.0 Esi Nọrọ na Ezigbo Akụkụ Google | Martech Zone
Penguin 2.0 Otu esi anọ na ezigbo akụkụ nke Google
Wednesday, June 19, 2013 Wednesday, June 19, 2013 Kelsey Cox
O rubeghị otu ọnwa kemgbe ọhụụ nchọta ọhụụ nke Google bidoro, ọ bụ ezie na etinyereghị ọhụụ ọhụụ ọhụụ Penguin 2.0 emezigharị ya ugbu a, ọ na-ebute ntakịrị nchegbu.
Ndị na-ere ahịa ọdịnaya agaghị enwe obi nkoropụ ma ọ bụrụhaala na ha na-eme atụmatụ ịnọ n'akụkụ nchebe nke Google. Dika data anakoro Marketoinfographic nke kachasị ọhụrụ, Gugulu Zuru Zoo, nke ahụ pụtara iduzi nke usoro SEO na-adịghị eji eme ihe dịka njikọta spamming, sneaky redirects ma ọ bụ cloaking, na ịrapagidesi ike na-eji ụkpụrụ dị ọcha, okpu ọcha.
Kpọmkwem, weebụsaịtị ndị na-elekwasị anya na ịmịpụta ọdịnaya dị mkpa na pụrụ iche, ebe ị na-achọpụta njikarịcha weebụsaịtị kwesịrị ekwesị, backlinks na-ekwenye ekwenye na akara ngosi mmekọrịta siri ike enweghị ike ịnwe okpomọkụ nke Penguin 2.0. Na-agbanwe agbanwe ọdịnaya, ngwa ngwa webpage ibu oge na nkwenye ndị sitere na weebụsaịtị ndị a ma ama bụkwa ụzọ iji hụ na enwechaghị mmetụta.
Nke a bụ nkọwa zuru ezu banyere ihe Google nwere: